Lahatsoratra nataon'i Liz Greene momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Liz Greene
Liz Greene dia alika tia, mianatra tantara, geek kolotsaina pop avy ao amin'ny City of Trees mahafinaritra, Boise, Idaho. Azonao atao ny mahazo ny hadisoana farany nataony tao amin'ny bilaoginy, Lo eo noho eo.
Vokatry ny traikefa ananan'ny haino aman-jery sosialy
Asabotsy, Aprily 16, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Liz Greene
Raha vao niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny haino aman-jery sosialy ny orinasa, dia natao ho sehatra hivarotana ny vokatra sy hampitombo ny varotra. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, na izany aza, ny media sosialy dia niditra an-tsokosoko ho amin'ny tambajotra ankafizin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera - toerana hifaneraserana amin'ireo marika ankafizin'izy ireo, ary ny tena zava-dehibe dia ny mitady fanampiana rehefa misy olana. Betsaka ny mpanjifa no mitady hifandray amin'ireo marika amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary ny anao